Alatsinainy 18 Mey 2020. – FJKM
Ny olona nomen’Andriamanitra ny Fanahiny
Rehefa nomen’Andriamanitra ny Fanahiny ny mpaminany dia nentiny tamin’ny lohasaha feno taolana.Toa tsy manan-tsafidy , fa izay nitondran’Andriamanitra no nandehanany .Eny, toe-javatra azo ambara fa tontolo tsy misy fanantenana intsony no naseho azy , kanefa nasain’Andriamanitra hiasa ,haminany izy.Tsy niady hevitra izy fa hankato an’ Andriamanitra noho ny Fanahin’Andriamanitra izay nitarika azy .
Rehefa tsy nisalasala ny mpaminany fa nankato ny baikon’Andriamanitra dia indro fa nahita vokatra .Nihetsika , nifanatona ,tonga nanana aina ireo taolana efa tsy nisy fanantenana teo aloha .Tsarovy fa rehefa manaiky ny fitarihan’ny Fanahy Masina isika dia mahita fahombiazana hatrany amin’ny asa fanompoana nantsoana sy nanirahan’nyTompo antsika.
3-Mandray fiainana vaovao
Ireo taolana maina nomena fahavelomana indray ireo dia entina maneho ny fanarenan’Andriamanitra ny taranak’Israely.Manavao ny olona, manome fiainana vaovao azy ireo amin’ny alalan’ny fanomezana ny Fanahiny ny Tompo (and14). Tsy ny Zanak’Israely ihany no tian’Andriamanitra omena fiainana vaovao fa ianao koa. Mangataha ny Fanahy Masina mba hitarika anao dia hotonga olom-baovao ianao.
Lazao ireo toetra mampiavaka ny olona manana ny Fanahy Masina .